Disposable echebe nkpuchi, KN95 echebe nkpuchi, Nitrile uwe - Sinnovation
Akpa Bopp na-eji polypropylene kpara akwa dị ka akwa anụ ahụ nwere ike ime ka ngwugwu gị nwee ọmarịcha ume. Designdị dị iche iche dịka (azụ azụ, okirikiri, isi mkpịsị aka, perforation, mgbochi skid na gussets wdg) nwere ike izute ndị ahịa 'ihe dị iche iche.
Dị ka shapes, e nwere okirikiri Jumbo akpa, square jumbo na U ụdị jumbo akpa na n'elu na-eweli akaghị, ma ọ bụ n'akụkụ eweli aka ma ọ bụ ala eweli aka. Nọmalị ọ nwere ntinye mmiri na mbata.
1 Ọ dabeere pp akpa, nke a na-akpọ akwa na nkenke, compositing nkiri na akwụkwọ site teepu mgbatị usoro. A na-eji ya na mbukota iche iche iche iche nke chemical ihe, dị ka powdery na granular akụrụngwa dị ka POM, ABS, polystyrene, poly-formaldehyde, polyvinyl chloride, styrene butadiene roba, injinịa plastik na a usoro nke powdery, granular ihe wdg
Eyi kpara akpa, nke a makwaara dị ka akpa akpụkpọ anụ, nke plastik, ka eji na nkwakọ ngwaahịa. Isi ihe bụ polypropylene (PP). Emere ya ọ bụ ezie na ọ bụ extrusion, na-agbatị n'ime eriri yarn, ịkwa akwa ma na-eme akpa. Ojiji: A na-ejikarị ya eme ihe n'ụdị powdery na granular.
Disposable echebe nkpuchi, Hand sanitizer
Igwe nkpuchi, KN95 nkpuchi nkpuchi
Shining kpakpando plastic Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ mba ofesi na ngwaahịa na ire ngwaahịa ngwaahịa plastik na ngwaahịa ngwugwu akwụkwọ, na-ekpuchi mpaghara nke 100 acres, ngalaba Vietnamese na-ekpuchi mpaghara nke 50 acres, osisi Cambodia na-ekpuchi mpaghara nke 50 acres. Na elu ịbịaru igwe, okirikiri ekwe, agba ebi akwụkwọ igwe, laminating igwe, akpa Ndinam igwe, ígwè obibi akwụkwọ, film ịfụ igwe, granulator mmepụta wdg akara, oru ike iru mba elu larịị. Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ narị ndị ọrụ aka ọrụ aka, nwere nnukwu ọrụ na njikwa njikwa. Ulo oru a nwere ngwa nyocha ndi okacha amara, ndi oru nyocha ndi okacha amara na usoro nyocha na ntuziaka siri ike, na site na asambodo njikwa njikwa mma nke ISO na asambodo QS, ogo ruru ogo kachasi na otu ulo oru. Ebe ọ bụ na oruru nke ụlọ ọrụ, "atụmatụ mbụ, azụmahịa ịga nke ọma, management gbakwasara" azụmahịa nkà ihe ọmụma, nzọụkwụ site nzọụkwụ na-China yiri ụlọ ọrụ na azụmahịa akporo, kasị n'ọtụtụ ebe na-akpa na ndị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ.